Iwu IR35 na Mmetụta ya na Franchises | Franchiseek
»Iwu IR35 na Mmetụta ya na Franchises
IR35 abia n'ike na ahia UK na odi na ya na Franchise
IR35 bụ iwu ụtụ isi na UK; ọ bụ iwu ụtụ ụtụ ụzụ ezubere iji tụọ 'Ọrụ elere anya na anya' na ego yiri ọrụ. Ndị IR35 ga-agwa ndị ọrụ na-anata ụgwọ maka ọrụ site na onye etiti, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ha pere mpe, yana mmekọrịta ya na onye ahịa ya bụ otu na ọ bụrụ na a na-akwụ ya ụgwọ, aga-ewere ya dị ka ndị ọrụ nke onye ahịa. N'isiokwu a, anyị ga-atụle mmetụta iwu ndị a na franchises? Mee iwu IR35 metụtara franchises? Ndị ọrụ franchise na-arụ ọrụ dị ka ndị ọrụ echere? Soro m nke ọma ma chọpụta.
Ihe iwu IR35 choro iru
Na nkenke, ka anyị leba anya n’ihe iwu IR35 chọrọ iji mezuo; ọ dị mfe; IRkpụrụ IR35 na-eme ka ụtụ isi dịkwuo elu site n'ịbelata ọrụ azụmahịa na-agbanahụ ụtụ isi site na iji aghụghọ. Iwu ndị a na-ahụ na e nyere ndị ọrụ ọrụ ụdi n'ụzọ ziri ezi dị ka ndị were ha n'ọrụ ma ọ bụ jiri aka ha na-akwụ ụgwọ ma kwụrụ ụgwọ ego ole kwesịrị ekwesị.
Businesskpụrụ azụmaahịa Franchise
Ka anyị were nzọụkwụ azụ iji ghọta otú ụdị azụmaahịa ụlọ ọrụ si arụ ọrụ. N'ime ọrụ franchise, onye ọchụnta ahịa azụmaahịa mbụ, nke a maara dị ka Franchisor, resịrị ikike iji ngwaahịa ya nye onye ọchụnta ego akpọrọ franchisee. Franchisor na-enye ndị Franchisee nkwado na-aga n'ihu na mpaghara dịka arụmọrụ azụmahịa, azụmaahịa na inweta ego. Na nzaghachi, Franchisee kwenyere ịgbaso usoro azụmaahịa nke Franchisor ma kwụọ ụgwọ ọchịchị franchisor dabere na pasent nke otu ahịa.
Kedu ihe Iwu Iwu IR35 pụtara maka Azụmaahịa Franchise?
IR35 a gbagwojuru anya, ma uzo kacha mma iji mee ka ihe di nfe ka ichoputa ya ma obu ahia abuo di n’ime IR35 bu ịza ajuju a; ndị ọrụ franchisees a na-ewere dị ka ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ akara nke Franchisor? Ọ bụrụ na ha abụghị ndị ọrụ, mgbe ahụ ha nọ na mpụga iwu IR35 a chọghịkwa ịtụ ụtụ isi ọrụ.
Kedụ ka usoro iwu IR35 ga-esi metụta aha? Ndi fran35a niile ga - ejide gi ma obu ihe ndi mmadu nile n'otu n'otu?
Azịza nke ajụjụ a dị mkpa bụ, dabere n'otu azụmahịa ahụ. Mgbe ị na-atụle iwu IR35 na azụmahịa azụmaahịa Franchise, maka ụfọdụ, ndị Franchisee na-akwụzi Franchisor maka ngwongwo / ọrụ; n'ụdị ụdị a, a na-etinye iwu IR35, ọ na-aghọ ọrụ na-agbanwe agbanwe ozugbo.
Ọ bụrụ na, maka ụfọdụ ihe, achọrọ onye franchis na-akwụ Franchisee maka ngwongwo na ọrụ enyere, nke a adịkarịghị njọ, yabụ, n'eziokwu, na-agbanwe ọrụ. Azụmaahịa Franchise na-adaba n'ụdị ọrụ a nwere ike ịkwadebe maka mgbanwe IR35 ọhụrụ site na ịtụle ihe ndị a:
A ga-ahuta ụlọ ọrụ dịka obere ụlọ ọrụ yana mpụga iwu IR35 ma ọ bụrụ na ọ na-ezute ma ọ dịkarịa ala abụọ n'ime njirisi atọ ndị a:
Ihe ntụgharị na-erughị £ 10.2m
Mpempe ego na-akwụghị ụgwọ ihe karịrị £ 5.1m
Enweghị ihe karịrị franchise 50 nke a na-ewere dị ka ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ na-akwụ.
Kedụ ka otu azụmaahịa ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'okpuru usoro a na usoro eji akwado maka iwu IR35 ọhụrụ?
N'okpuru bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji kwadebe maka mgbanwe ụtụ IR35:
Pkwadebe maka mgbanwe ụtụ isi IR35 a dị oke mkpa ebe enwere nsonaazụ ma ọ bụrụ na HMRC ekwenyeghị na nyocha nke ụlọ ọrụ ahụ; nke a abụghị usoro kwụ ọtọ ma nwee ike ịgụnye nyocha 'ọnọdụ ọrụ' gbagwojuru anya. Ka anyị leba anya n'ụfọdụ ndụmọdụ iji nyere gị aka ịkwadebe.
Na-eme Nyochaa maka Franchisees A Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ
Na nkwadebe maka mgbanwe ndị a, ọ dị mkpa ime nyocha nke ndị ọrụ ma ọ bụ franchisor nke Franchisor na-akwụ. Ga-enwe ike ịza ajụjụ ndị a dịka:
Afọ ole Franchisees na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ gị?
Kedu ihe bụ mkpa ha ma ọ bụ ntinye aka na azụmahịa gị?
Kedu akụkụ azụmahịa / ọrụ ị na-akwụ Franchisees maka?
Onye nọ n’ime ma ọ bụ n’abụghị nke iwu ọhụụ?
Ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịchọpụta ma ndị Franchisees 'daa' n'èzí 'ma ọ bụ' n'ime 'iwu ọhụrụ IR35. Zọ kachasị mma iji mezuo nke a bụ iji nyochaa Franchisees n’otu n’otu. Ilingghara igosipụta ezi uche dị na ya iji kụọ ọrụ ndị dị otú ahụ maka ebumnuche ụtụ isi maka ọrụ nwere ike ịkpata nnukwu nsonaazụ. Ọnụọgụ gọọmentị na-enyocha ọrụ maka mgbakwunye ụtụ (CEST) nwere ike inyere gị aka ikpebi ma iwu IR35 ndị ​​ọrụ na-arụ ọrụ.
Soro Franchisees Na-ekwurịta Okwu
Ọ dị mkpa ka gị na Franchisees na-ekwurịta okwu mgbe niile. O yikarịrị ka ha ga-aga n'ihu na mmekorita ha na ụlọ ọrụ nwere usoro iwu na usoro IR35 kwesịrị ekwesị; imeghe na uzo ga - enyere aka hụ n’ihu ị na - adọta onyinye kachasị na - akwụghị ụgwọ.
Azụmaahịa Franchise adịkarịghị n'akụkụ iwu IR35 mana maka okwu peculiar nke edepụtara n'elu ebe ndị franchisis na-akwụ franchisees maka ngwongwo na ọrụ. N'okwu ahụ, ndị Franchisee ga-abụ ndị ọrụ nke Franchisor, iwu IR35 ga-etinye n'ọrụ.
Akingnwe oge iji kwadebe ma ọ bụrụ na ị nwere nwe ahịa azụmaahịa bụ ihe ga-akacha mma iji zere iwu tara akpụ na-abịa na imebi iwu IR35.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị kpọtụrụ onye edemede nke edemede a, Julie Provino, onye na-azụkwa ahịa akpọrọ GanHR, biko pịa ebe a ziga ya ozi.